सेयर Achives| Page2of 172
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको साधारण सभाबाट बोनस शेयर पारित
काठमाडौँ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको १५औं वार्षिक साधारण सभा आज कम्पनीको कार्यालय, ज्ञानेश्वर, काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । कोभिड-१९ कारण उत्पन्न जोखिमलाई ध्यानमा राखि आवश्यक सुरक्षाका मापदण्डहरु अपनाई, भर्चुवल प्रविधीलाई समेत उपयोग गरी सभा सम्पन्न गरिएको हो । सभाले कम्पनीका अध्यक्ष …
एनआईसी एशिया लघुवित्तको आईपीओ नेप्सेमा सूचीकृत, ओपन रेञ्ज कति ?
काठमाडौँ । एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १ करोड ४८ लाख कित्ता साधारण शेयर(आईपीओ) नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको छ । साथै नेप्सेले उक्त कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि ११० रूपैयाँ ४३ पैसादेखि अधिकतम ३३१ रूपैयाँ २९ पैसासम्मको ओपन रेञ्ज प्रदान गरेको …
काठमाडौँ । मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ३७ हजार २ सय ६० कित्ता शेयर थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ) निष्काशन गर्ने भएको छ । एफपीओ निष्काशनका लागि नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैकिङ्ग लिमिटेड (एनएसएमबिएल) निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त भएको हो । मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय …
शेयर बजार लगातार बृद्धी, आजपनि ३७.९३ अंकले बढ्यो, सबै समूह हरियाली
काठमाडौँ । यो साताको तीनै दिन शेयर बजार लगातार बढिरहेको छ । साताको पहिलो दिन आइतबार ९.३५ अंकले बढेको परिसूचक दोश्रो दिन ३३.२७ अंकले बढेको थियो । साताको तेश्रो दिन आज पनि ३७.९३ अंकले परिसूचक बढेको छ । आज २.९१ प्रतिशतले परिसूचक बढ्दा …
एभेरष्ट बैंकसहित ४ वित्तीय संस्थाको बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत, कस्को कति ?
काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से)मा एभरेष्ट बैंकसहित ४ वित्तीय संस्थाको बोनस शेयर सूचीकृत भएको छ । एभरेष्ट बैंकसहित स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था, उन्नत्ती लघुवित्त वित्तीय संस्था र श्री इन्भेस्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनीको बोनस शेयर आज नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । नेप्सेका अनुसार …
तीन तहको पुँजीगत लाभकर, ५० करोड भन्दा बढी ऋण लिने कम्पनी सूचिकृत हुनै पर्ने
काठमाडौं । पुँजी बजार तथा मुद्रा बजार सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको संसदीय उप समितिले ३ तहको पुँजीगत लाभकर प्रस्ताव गरेको छ । उप समितिले दिर्घकालिन लगानी र अल्पकालिन लगानीका लागि छुट्टा छुट्टै पुँजीगत लाभकर प्रस्ताव गरेको हो । एक वर्ष भन्दा कम …
ब्रोकरको चुक्ता पुँजी ५०० प्रतिशत बढाउन सिफारिस
काठमाडौं । ब्रोकर कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ५०० प्रतिशत वृद्धि गर्न संसदीय उप समितिले सिफारिस गरेको छ । संसदको अर्थ समितिले गठन गरेको पुँजी बजार तथा मुद्रा बजार सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उप समितिले ब्रोकर कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ५ सय प्रतिशशतले बढाएर १० करोड …
‘नेप्सेमा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउनुु, इण्डेक्सलाई परिमार्जन गर्नु’
काठमाडौं । पुँजी बजार सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित संसदीय उप समितिले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)मा विदेशी लगानी भित्र्याउन सिफारिस गरेको छ । सांसद रामकुमारी झाक्री नेतृत्वको उप समितिले नेप्सेको संरचनागत सुधार गरि पुँजी र प्रविधिसहितको विदेशी ख्याति प्राप्त रणनीतिक साँझेदार भित्र्याई स्वामित्व समेत पुनरसंरचना …
नेप्से र धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीलाई आइपीओ भर्न पनि निषेध
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका कर्मचारीहरुलाई आइपीओ भर्न पनि नपाउने व्यवस्था आउने भएको छ । संसको अर्थ समितिले गठन गरेको पुँजी बजार तथा मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन उप समितिले बोर्ड र नेप्सेका कर्मचारीहरुलाई आइपीओमा आवेदन गर्न समेत नदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको …
बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन बाटो खुल्दै, सेयर बजारको बेथिति सुधार हुने आशा
काठमाडौं । अर्थसमितिले रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा बनाएको पुँजी बजार तथा मुद्रा बजारसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिले बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्देशन गर्न मुल समितिलाई सिफारिस गरेको छ । उपसमितिको मंगलबार बसेको बैठकले पुँजीबजार सुधारका लागि तत्काल बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई यस्तो लाइसेन्स …
नेप्से परिसूचक ३३.२७ अंकले बढ्यो, म्युचुअल फण्डबाहेक सबै समूहमा हरियाली
काठमाडौँ । साताको दोश्रो दिन आज नेप्से परिसूचक ३३.२७ अंकले बढेको छ । २.६३ प्रतिशतले बढ्दा परिसूचक १२९८.७३ अंकमा पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से) का अनुसार आज १७६ कम्पनीको २७ लाख ३१ हजार ४ सय ९८ कित्ता शेयर किनबेच हुँदा ९२ …
९.३५ अंकले बढ्यो नेप्से, १ अर्ब भन्दाबढीको कारोबार
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन आज नेप्से परिसूचक ९.३५ अंकले बढेको छ । शेयर बजार ०.७४ प्रतिशतले बढ्दा नेप्से परिसूचक १२६५.४५ अंकमा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार आज १७२ कम्पनीका २८ लाख ६ हजार ८ सय ९८ कित्ता शेयर किनबेच हुँदा १ अर्ब …